Ingubo: Uhlelo lokusebenza oluwusizo lokudlala imisindo ye-ambient nokuningi | Kusuka kuLinux
Esikhathini samanje, abantu abaningi bahlala bexhumana namakhompyutha, noma ngabe kwenzelwa umsebenzi, kumnandi noma ukumane nje uphumule. Futhi ngenkathi lokho kwenzeka, bavame ukusebenzisa okufanayo ku- lalela umculo noma ulalele nje imisindo enhle yangemuva ngomsebenzi owufunayo. Kwesinye isikhathi basebenzisa amawebhusayithi aku-inthanethi futhi kwesinye isikhathi umdlali olula.
Kodwa-ke, uma kukhulunywa nge dlala elula futhi emnandi imisindo yangemuva noma ingoma elula noma eyingqayizivele, uhlelo olubizwa ngokuthi Ingubo yokulala kungaba enye indlela ewusizo kakhulu yalokhu.
Ngaphambi, faka ngokugcwele ukuphawula Ingubo yokulala, kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi ngenxa yale njongo efanayo, uhlelo lokusebenza «Amahedisethi», inqobo nje uma uxhumeke ku-inthanethi, ngoba ikuvumela ukuthi udlale amavidiyo we-Inthanethi anemisindo emide noma umculo ngaphandle kokuphazamiseka kokukhangisa.
"Ihedsethi isidlali somculo esilula seMac, Windows, neLinux ngokusesha okwakhelwe ngaphakathi ku-YouTube, isikrini sasekhaya esinohlu lokuthandwa ngabantu ngezinhlobo zezikhathi nangezikhathi, futhi okungcono kakhulu, umsakazo onikwe amandla yiReddit. Amahedisethi athatha izingoma ezabiwe ngaphezulu kwama-reddits omculo angaphezu kwama-80, azihlukanisa ngezigaba, futhi azidlale ngokuzenzekelayo. Kuyindlela epholile futhi eyingqayizivele yokuthola umculo omusha njengoba ukhethwa abanye abantu abanjengawe hhayi ngama-algorithms." Amahedisethi: Isidlali somculo sisakazwa sisuka ku-YouTube nakuReddit
1 Ingubo: Uhlelo lokusebenza lokudlala imisindo engemuva
1.1 Yini ingubo yokulala?
Ingubo: Uhlelo lokusebenza lokudlala imisindo engemuva
Yini ingubo yokulala?
Ngokusho kwe- iwebhusayithi esemthethweni ku-GitHub, Ingubo yokulala, lolu hlelo lokusebenza oluncane nolulula luchazwa ngale ndlela elandelayo:
"Isicelo ewusizo ukulalela imisindo ehlukene. Imisindo engathuthukisa ukuhlushwa futhi inyuse umkhiqizo womsebenzisi. Noma ukuthi bavele babavumele balale endaweni enomsindo."
Okwamanje, Ingubo yokulala iya kunguqulo «0.4.0» futhi ine phakathi kwayo izici ezivelele kakhulu Okulandelayo:
Isibonisi esihle sokuqhafaza esihle, futhi esiqondile: Lapho umsebenzisi ethulwa khona iqoqo elincane lemisindo yezemvelo (Imvelo, ukuhamba, izinto zangaphakathi, umsindo kanye nenkambiso) ezingakhiqizwa kusetshenziswa ibha yesilayida sayo sevolumu ukulungisa izinga levolumu oyifunayo ngokunambitheka klaleli. Futhi okuthile okuwusizo kakhulu ukuthi, kukuvumela ukuthi udlale imisindo eminingi efakiwe noma engeziwe ngasikhathi sinye, ukuze ukwazi ukwenza ukuxuba okwenzelwe wena ukunambitheka komsebenzisi ngamunye.
Ukudlala ngemuva ekuqaleni: Ukugwema ukuxhumana ne-interface yokuqhafaza. Futhi uyiqale, kudlala ukucushwa komsindo okusetshenzisiwe kokugcina. Ibuye ikuvumela ukuthi uqhubeke nokudlala lezi zilungiselelo ngemuva kokuvala uhlelo lokusebenza.
Izinqamuleli zekhibhodi eziwusizo: Ngokusebenzisa ngokunethezeka, okusheshayo nokuqondile kohlelo lokusebenza ngekhibhodi.
Izindlela ezahlukahlukene zingasetshenziselwa ukulanda, ukufakwa nokusetshenziswa kwayo. Isibonelo, ngama-repositories uma sine- I-Distro Arch ne-OpenSuse, nge Izindawo zokugcina ze-PPA uma sinayo eyodwa Ubuntu Distro noma okunye okuphuma noma okuhambisanayo, ngeFlatpak, futhi ekugcineni, kuyilande bese uyihlanganisa ekuqaleni.
Ngokwesimo sethu esisebenzayo namuhla, sizokhetha umzila wokugcina, ngoba, okwejwayelekile Ukuphendula kwe-MX Linux kubizwa Izimangaliso, yize emukela Izindawo zokugcina ze-PPA, kufanele ngaso sonke isikhathi sifake ukhiye wokugcina ngesandla, futhi yize wamukela I-Flatpak, lokhu kuhlala kufaka isisekelo esinzima sokusebenza kwephakeji.
Ngakho-ke, into yokuqala okufanele uyenze ukulanda futhi uvule iziphu kufayela le- ifayela "tar.gz" we inguqulo "0.4.0". Bese sizibeka ngaphakathi kwifolda «~/Descargas/blanket-0.4.0» nge ukuphela kwempande. Futhi yenza imiyalo elandelayo yomyalo:
Uma wonke amaphakheji kulayini wokuqala etholakala futhi efakwe ngempumelelo, uhlelo lokusebenza lungavulwa. Ingubo yokulala akunankinga ku- I-GNU / Linux Distro. Esifundweni sethu, umtapo wezincwadi «libhandy-1-dev» Kwakungekho endaweni yethu yokugcina, ngakho sayilayisha sayifaka namafayela ayo wokuncika («gir1.2-handy-1_1.0.0-2_amd64.deb, libhandy-1-0_1.0.0-2_amd64.deb y libhandy-1-dev_1.0.0-2_amd64.deb») kusuka kokulandelayo isixhumanisi futhi siyawafaka sisebenzisa umyalo olandelayo womyalo:
Ngemuva kwalokhu, singakhipha kuphela Ingubo yokulala kusukela Imenyu yezicelo, uyihlole futhi uyisebenzise. Njengoba kubonakala ezithombeni ezilandelayo:
Okokugcina, kulabo abafuna ukulanda eminye imisindo yamahhala neyasebukhosini ukuze bakhulise inani lemisindo kusuka Ingubo yokulala, ungalanda okunye kokulandelayo isixhumanisi.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «Blanket», okuncane umsindo wokudlala wohlelo lokusebenza, nabanye amafayela womsindo we-multimedia nomculo ngezindlela ezahlukahlukene zokukhiqiza ngemuva kuma-Operating Systems wethu wamahhala futhi avulekile; inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Ingubo: Uhlelo lokusebenza oluwusizo lokudlala imisindo ye-ambient nokuningi
Imivuzo enesibindi noma ukuthi ungangena kanjani emhlabeni wama-cryptocurrensets ngaphandle kokufaka imali yakho engcupheni